Home News Kenya oo Cabsi Xoogan Ka Qabta Haweenka Ku Biraya Al Shabaab
Kenya oo Cabsi Xoogan Ka Qabta Haweenka Ku Biraya Al Shabaab
Wargayska Daily nation ee ka soo baxa gudaha dalka Kenya ayaa ku waramaya in ay sii kor dhayaan haweynka Kenya u dhashay ee ku biiraya xarakada Al-Shabaab.
Ilaha amaanka Kenya iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa walaac farabadan ka muujinaya tirade haweynka da’da yar ee ku biiraya Al-Shabaab,
Wargayska Daily nation ayaa soo xigtay cilmi baaris uu sameeyay Machadka Daraasaadka Amniga ee Qaaradda Africa ayadoona daraasadaasi ay ka soo dhax muuqdeen haween u dhashay dalal ay kamid yihiin Tansania.
Daraasadan ayaa waxaa laga sameeyay oo uu macadhadku wareysiyo kala duwan la yeeshay illaa iyo 108 haween kuwaas oo kukala sugnaa magaalooyinka kala duwan ee dalka Kenya.
Daraasadda ayaa sidoo kale waxaa ay Muujisay in Haweenku ay Kaalin muhiim ah ku leeyihiin howlaha kala duwan oo ay Al-shabaab qabtaan,
Shaqooyinka ay u qabtaana haweenka Al-Shabaab u soo goysta ayaa la sheegayaa in ay ugu Muhiimsan tahay Sirdoonka oo ay kaalin Lixaad leh ka qaataan.
Booliska Kenya ayaa sheegaya in hawlaha ugu tirade badan ay haweenkan u qabtaan in ay tahay hawlo basaasnimo, ayagoona intaasi sii raaciyay in dhawr jeer ay u qabteen falalka nuucaas ah haween farabadan.
Kenya ayaa Al-Shabaab bartilmaamayd satay dhowr jeer si ay uga soo furtaan muwaadiniinteeda gacanta ugu jiro, ayagoona tilmaamayo haweynka Kenya ee Al-Shabaab la shaqeeyo in aysan kala kulmin wax xushmad ah.
Dowladda Kenya waxa ay cabsi farabadan ka muujinaysaa in Al-Shabaab ay badalaan istiraajiiyada ay ku shaqeeyaan ayadoona ay sii kor dheyso cabsi ah in Al-Shabaab ay shaqaalay siiyaan haweyn farabadan oo u dhashay Kenya.